Sein Lyan - စိ န် လျှံ: အသင်ရော... ဘယ်လိုပြုံးလဲ
Writer Sein Lyan Time 12:09 am
စိတ်ထဲမပါလို့ကတော့ ဟန်လည်းမဆောင်တတ် ...
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ထူးချွန်တဲ့သူ တစ် ယောက်
10 November 2009 at 02:28
အဖိုးတန်တဲ့ တန်ဖိုးရှိတဲ့ဘ၀လေးကို ဖျက်ဆီးသွားတာလဲ ဒီစိတ်တွေပါပဲဗျာ.. အမြန်ဆုံး ပြန်လည်ကောင်းမွန်ပါစေ တိုင်းပြည်အတွက် အကျိုးရှိတဲ့ လူတယောက် ဖြစ်ပါစေဗျာ မပြုံးသွားတော့ဘူး
"မိဘဆိုတာ စေတနာထားပြီး မပြောရဲတော့ သားသမီးတွေက ပညာတတ်လာရင် ငါတို့လုပ်တာ မှန်နေတာပဲ ဆိုတဲ့ အတွေးမှားတစ်ခု စွဲကပ်သွားတယ်ထင်ပါတယ်…" it's true!
"စကားဆိုတာက ပစ္စည်းတစ်ခုကို တစ်ယောက်ယောက်ကို ပေးလိုက်သလိုပဲ… သူတို့ မယူရင် ကိုယ်ပဲပြန်ရတယ်မဟုတ်လား…" agreed!
It's my first time to giveacomment on your blog though I visit ur blog often.
Please keep up with your good work. :)
10 November 2009 at 04:08
အတ္တ ၊ မာန တွေက စိတ်ကို အသေအကြေသတ်တဲ့ မိစ္ဆာကောင်ကြီးတွေပါပဲလေ။
နောက်ပြီး ဟန်ဆောင်ခြင်းမရှိပဲ ပြုံးပြလိုက်တဲ့အပြုံးက တခြားသူတစ်ဦးအပေါ် ကူးစက်ပျော်ရွင် စေတတ်ပါတယ်။ :D
စိတ်ပါလက်ပါ နှစ်နှစ်ခြိုက်ခြိုက်ပဲ ပြုံးပါတယ် လို့ ပြောချင်ပေမယ့် လက်တွေ့မှာတော့ အခြေအနေအရ အပြုံးမျိုးစုံ ပြုံးဖူးတယ်၊ အလုပ်သဘောအရ တခါတလေ မပြုံးချင်လဲ ပြုံးပြရ.. မိဘမျက်နှာ နဲ့ သွားဖြဲပြရတာ မျိုးတွေ ရှိတယ်၊
တခါတလေလဲ တစ်ယောက်တည်း မဲ့ပြုံးပြုံးမိပါတယ်
ယိုးဒယားမှာ အပြုံးတွေက နာမည်စုံပဲတဲ့.. မြန်မာလို မဲ့ပြုံး မချိပြုံး စသဖြင့် ရှိသလိုပေါ့
.. လူဆိုတာ ထားသင့်တဲ့ မာနတော့ ရှိရမယ်လို့ မြင်တယ်၊ ဒါပေမယ့် မောက်မာလွန်းရင်လဲ အကျနာတတ်တယ်၊ နေပြန်ကောင်းသွားတယ်ဆို တော်သေးတာပေါ့
ချစ်ညီ ဖိုးစိန် က ကိုယ့်အကို အတင်းကို ပြောနေတဲ့ ပုံစံ မြင်ပြီး ပြုံးမိရတယ်။
“လူ့ အဖိုးတန်တွေမှာလဲ အားနည်းချက်တွေ ၇ှိတတ်ကြတာပါပဲလေ။”
“ဟန်ဆောင်မှု” ဆိုတာကို ယဉ်ကျေးမှုတစ်ခု အနေနဲ့ သုံးစွဲနေကြတာ ကမ္ဘာနဲ့ တ၀ှမ်းပေါ့။
စိတ်ရှိတဲ့အတိုင်းနေတဲ့အခါ ကိုယ်တို့တွေက မယဉ်ကျေးသောသူတွေ ဖြစ်လာကြရတာလဲ သဘာဝပဲလေ။
ဒါပေမဲ့ အဲဒီ စိတ်ရှိတဲ့အတိုင်းနေတဲ့အခါ “လူတွေဟာ သူ့သဘောသူ ဆောင်နေကြတယ်” ဆိုတဲ့ အသိနဲ့ စိတ်တစ်ချို့ကို ဥပေက္ခာလေး ထားပေးလိုက်ရင် ဟန်ဆောင်စရာမလိုပဲ ပြုံးပြလို့ ရသွားမှာပါ။ နောက်ပြီး ဖိုးစိန်ရဲ့ အကိုဝမ်းကွဲလို ဘ၀င်စိတ်ကြီး ၀င်နေတဲ့ သူတွေကို ဘေးကနေ သတိမပေးပဲ မြှောက်ပင့်ပေးနေကြ၊ လွှတ်ထားပေးနေကြတဲ့ သူတွေဟာလည်း တစ်နည်းအားဖြင့် အပြစ်ရှိသူတွေထဲ ပါတယ်လို့ အကိုတော့ ယူဆတယ်။ ရှေ့မှာတော့ ပြုံးပြုံး၊ ပြုံးပြုံးနဲ့ အမုန်းကို ဟန်လုပ်ပီး နောက်ကွယ်မှာ မှ စကားတင်း ဆိုကြ၊ ပျစ်ပျစ်နှစ်နှစ် ပြောကြတာထက် သူ့ကို အမုန်းခံပြောပေးကြရင်တော့ အဲဒီ ဆရာဝန်အဖြစ်က ဒီလောက် ဆိုးဝါးသွားမယ် မထင်ဘူးလေ။ ဒါက အကို့ အမြင်ပါ။ ဆရာဝန်လေး ကိုယ်တိုင်က ကုမရတဲ့ ဘ၀င်ရူး ဖြစ်နေရင်တော့ အကို့ အမြင်က မှားသွားမှာပေါ့။
ဟန်ဆောင်လို့ မရသူတွေထဲမှာ အကိုလဲ ပါတယ်။ ဟန်ဆောင်ပြီး ပြုံးရတဲ့ အခါတိုင်း အဲဒီအပြုံးဟာ ဟန်ဆောင်ပြုံးနေတာမှန်းလဲ လူတိုင်းက အကို့ အပြုံးကို ဖတ်တတ်ကြပါတယ်။
အကိုလည်း ရင်ထဲက လှိုက်လှိုက်လှဲလှဲ၊ ငြိမ်းငြိမ်းချမ်းချမ်း၊ အေးအေးမြမြ ပဲ ပြုံးပြချင်ပါတယ်။
ချစ်သူ၊ မုန်းသူ လူအားလုံးကို အဲဒီလို ပြုံးပြနိုင်ဖို့ကတော့ ကြိုးစားဆဲပဲ ချစ်ညီ ဖိုးစိန်ရေ....
ချစ်ညီ မျောက်ငို ကို
စိတ်အာရုံတခုကြောင့် ဘ၀ရဲ့ ကြိုးစားအားထုတ် မှုတွေ အလဟဿ ဖြစ်သွားရတာနှမျောစရာပါပဲ။
လူဆိုတာ ဗီဇ နဲ့လာတာဆိုပေမယ့် မိဘနဲ့ ပါတ်ဝန်းကျင် က အတတ်နိင်ဆုံး ပြုပြင်ပေးရတာပါပဲ။
ဒီနေရာမှာ သုံးသင့်တဲ့စကားလုံးက အိုးထိန်းသည် ဆိုတာပါပဲ။ဒီဥပမာက အသုံးများလို့ ဘာကိုဆိုချင်မှန်း သိနေမယ်ထင်ပါတယ်..။
ကိုယ်စီ ကိုယ်စီ တွေးသင့်တာတွေ လုပ်သင့်တာတွေ လုပ်လာတဲ့အခါ တယောက်နဲ့တယောက် နှစ်နှစ်ကာကာ ပြုံးဖြစ်ကြမှာပါ။
ပင်စည်တွေဖြောင့်တဲ့တောမှာ အောက်ခြေရှင်းနေသလို မျိုးပေါ့....။
10 November 2009 at 06:40
မိဘဆိုတာ စေတနာထားပြီး မပြောရဲတော့ သားသမီး တွေက ပညာတတ်လာရင် ငါတို့လုပ်တာ မှန်နေတာပဲ ဆိုတဲ့ အတွေးမှားတစ်ခု စွဲကပ်သွားတယ်ထင်ပါတယ်…
လူတွေက အပေါ်ယံဟန်ဆောင်တာကိုသိပ်သဘောကျ တတ်ကြတယ်။ အပြုံးတုလေးဆောင်ထား၊ ပြောသာပြော
တာပါ ကိုယ်ကိုယ်တိုင်လည်း စိတ်မပါရင် မပြုံးချင်ဘူး။
အင်းလေ စိတ်တော့မကောင်းစရာပဲ ကိုယ်လိုချင်တာ အမြဲရတတ်တဲ့သူတွေဟာ အဆုံးသတ်မကောင်းကြဘူး ဆိုတာသတိထားဆင်ခြင်သင့်တယ်။ ဆရာဝန်တစ် ယောက် ဆုံးရှူံးရတာတော့ ၀မ်းနည်းစရာပေါ့။ သူ့ ဘ၀လည်း သနားဖို့ ကောင်းသွားတယ်။
ကိုယ်က အရူးဆိုတာ ယပ်တောင်ကြီးခေါင်းထိုး နို့ဆီခွက်တွေတန်းလန်းဆွဲမှ အရူးလို့ထင်နေတာ တကယ်က အဲ့လိုမျိူးဘ၀င်ရူး တွေအများကြီး ငယ်ငယ်
တုန်းကတော့ ညီလေးလိုပဲကိုယ်မှန်မယ်ထင်တာပဲလုပ်တယ်.ထင်ချင်သလိုထင် ခင်တွယ်စရာလူ သိပ်များများစားစား မလိုပါဘူး.လွမ်းလောက်တဲ့သူ သိပ်များများ မလိုပါဘူး ပေါ့..ခုတော့
ကိုယ်ဘ၀င်မြင့်ရင်လည်း ရယ်ချင်တယ် သူများဘ၀င်မြင့်ရင်လည်း ရယ်ချင်လာတယ်..
ညီမကတော့ :D ဒီလိုပြုံးပြီး ချန်ဂီကနေ ကြိုနေမယ်နော် .. :P
ခုနောက်ပိုင်းတော့ စိတ်သိပ်မပါလဲ လုပ်သင့်တယ်ဆိုပြီး လုပ်ရတာတွေရှိပါတယ် .. တချို့ပေါ့ ..း))
10 November 2009 at 10:51
မမ လှိုက်လှိုက်လှဲလှဲ ပြုံးပြသွားတယ်နော်
လူတစ်ယောက်ရဲ့ နှုတ်ကထွက်တဲ့ စကားမှန်သမျှဟာ
ကိုယ်တော့သိထားတယ်။ ဒါကြောင့် သူများကိုပြောချင်ရင် ကိုယ့်ကိုယ်ကို ပြန်ကြည့်လိုက်မိတယ်။
လောကမှာအဲလိုလူမျိုးတွေ အများကြီး ရှိတာပေါ့ညီလေးရာ ပညာမာနအရူး ဥစ္စာဓနအရူး ရာထူးအာဏာအရူး အရူး တကအရူးထဲမှာ ဒီအရူးတွေက ကုရခက်သလို လူ့ လောကကြီးအတွက် အန္တရယ်လဲရှိတယ် လူတယောက်ရဲ့လူတယောက်အဖြစ် ရပ်တည်ဘို့အခြေခံ သဘောလေးမှနားမလည်ရင် ဒီလူဟာ လူ့ ပတ်ဝန်းကျင်အတွက် အဆိပ်တောက် ဖြစ်လာတာပေါ့ဒါ့ ကြောင့်ဒီနေရာက ပြောချင်တယ် လူသားတိုင်း မှန်ကန်တဲ့အတွေးခေါ်နဲ့တဘက်သားအပေါ်မနှိမ့် ချဘဲ အဖြူေ၇ာင် နှလု့းံသားပိုင်ဆိုင်ပြီး အပြုံးများ လှိုင်လှိုင်ဝေနိုင်ပါစေလို့ဆန္ဒပြုရင်း ချိုမြိန်သော အပြုံးများ ပြုံးနိုင်ကြပါစေ ခင်တဲ့ ကိုကြီး သုဒြေ္န
ဖတ်နေရင်း တွေးလိုက်တယ် ထင်တော့ထင်သားပဲ
လူတွေက သူများသာမြင်တာ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုကျတော့ မပြင်ဘူးဗျ..
ကျွန်တော်ဆိုလိုချင်တာက ကိုယ့်ကိုယ်ကို အရင်ဆုံးမပါ.. အောင်မြင်ပြီလား.. ဆက်လက် လက်ဆင့်ကမ်းပြီး တစ်ပါးသူကို ဆုံးမဖို့ပါ..
မုသားမပါ လင်္ကာမချော ဆိုသလိုပါပဲ
တစ်ချို့နေရာတွေမှာလည်း ဟန်ဆောင်ပြုံးတော့ ပြုံးပေးရတာရှိပါတယ်..
ဒါပေမယ့် အဲဒီ တစ်ချို့ တစ်ချို့ တွေက များနေတော့ လောကကြီးက မခက်ပေဘူးလား..
ကြည်လင်တောက်ပတဲ့ အပြုံးစစ်စစ်နဲ့ ပြုံးပျော်နိုင်ပါစေ။
စိတ်ထဲကမပါပဲနဲ့ ဟန်ဆောင်မပြုံးတတ်လို့ ကြည်ကြည်လင်လင်ပဲပြုံးသွားပါတယ်နော်။